Ezona ntonga zilungileyo zokuloba. Iingcebiso zokukhetha | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Izixhobo, abanye
Ukuba ungumthandi wokuloba kwezemidlalo, kuya kufuneka wazi ukuba yintoni ezona ntonga zokuloba zibalaseleyo. Eli nqaku lijolise kukunika umbono obanzi kangangoko malunga nento oyifunayo ukuze ube nentonga yokuloba ukuze ilunge kwaye yeyiphi eyona ilungileyo ngokokusetyenziswa okuza kunikwa okanye ixabiso lemali okulungeleyo ukulithenga .
Esi sikhokelo sokuthenga siya kuba luncedo kakhulu kwaye ngokuqinisekileyo uya kubhekisa kuso rhoqo ukwandisa ulwazi lwakho.
FISHOAKY Intonga yokuloba ...
1 Ifuna ntoni intonga yokuloba
2 Iingcebiso zokukhetha
3 Iintonga zokuloba ezilungileyo kunye namaxabiso abo
3.1 Intonga yokuloba elwandle
3.2 Iindonga zokuloba imilambo
3.3 Iintonga zeTeleskopu
Ifuna ntoni intonga yokuloba
Ngaphandle kokuqhubela phambili, masiqwalasele kwinto ekufuneka intonga yokuloba ilunge ngayo. Into yokuqala kukwazi uhlobo lokuloba kwezemidlalo esikwenzayo. Ayifani nokuloba emanzini amtyuba kunasemanzini amatsha. Uhlobo lokuloba lubalulekile ukunika uhlobo lwentonga esiza kuyisebenzisa. Kukho iindidi eziphakathi, eziphantsi okanye eziphakamileyo kwaye zikhona nazo zonke iimpawu ezinokubakho.
Umgangatho weentonga zokuloba uxhomekeke kwizinto ezakhiwe ngazo. Ngokudibeneyo, zonke ezi zinto ziya kwenza ingcongolo ngomgangatho ongaphezulu okanye omncinci. Kukho izinto ezi-3 ezisisiseko xa kuziwa ekwazini ukuba intonga esinayo ilungile okanye hayi. Makhe sibahlalutye ngononophelo:
Uhlobo lwezinto zecandelo ngalinye zenziwe. Ukuba ezi zinto azikho mgangathweni, intonga yokugqibela ayinakuba yiyo. Ngokufanelekileyo, ezona zinto zibalulekileyo zezomgangatho olungileyo kunye nezinto zokuncedisa, ezingabalulekanga kangako, nokuba zikumgangatho ongaphantsi ukuze ixabiso lokugqibela liphantsi.
Umgangatho we-ergonomic shaft. Imiba ebalulekileyo efana nentuthuzelo, ukuphatha, ubunzima obuxhasayo kunye nokulinganisela okusinika impembelelo apha. Ezi mpawu zinoxanduva lokuloba okusebenzayo ngakumbi okanye okubiza kakhulu.
Uhlobo lweReel. Lo ngumcimbi ekufuneka ugqitywe ngumlobi. Kuya kufuneka sikhethe enye ehambelana nentonga kwaye inokwenza indibaniselwano elungileyo.
Nangona ngaphambili ii-canes zazenziwe ngoqalo, oku kwakuquka iindleko ezongezelelekileyo kunye nomonakalo omkhulu kwindalo. Ngesi sizathu, iintonga zangoku zenziwe nge-fiberglass, ekwaziyo ukuxhasa ubunzima obungaphezulu kunye nokuba bhetyebhetye ngakumbi.
Siza kukunika iingcebiso ezimbalwa eziza kukunceda wazi indlela yokukhetha intonga yokuloba. Eyokuqala, kukwazi ukuba zeziphi iintlobo zentlanzi ofuna ukuzibambisa. Oku kubalulekile njengoko izinto ezininzi zixhomekeke kuyo. Ayifani ukuya kukhangela iintlanzi ezinobungakanani obuncinci kunabanye abanobunzima obukhulu. Iimpawu zentonga yokuloba ziya kwahluka.
Kuyanceda kakhulu ukwazi nokuphanda iintlobo ezininzi zeentlobo ezihlala kweyona mimandla ikufutshane ukuze sizazi iintlanzi esiza kuziloba. Ingcebiso yesibini yile zazi kakuhle iinxalenye zentonga eziza kukulungela. Kuxhomekeka kumasiko akho okanye imikhwa yokuloba, kukho iintonga eziza kungena ngcono kunezinye. Intonga inezinto ezininzi, phakathi kwazo kukho amakhonkco, isikhombisi, njl. Okukhona uyazi malunga neentonga zokuloba, kokukhona unokuchaneka ngakumbi xa ukhetha eyona ilungileyo kuwe.
Into enxulumene noko besiphawule ngaphambili, kukwazi ukuba loluphi uhlobo lokuloba oza kulwenza. Ukuba uya kuloba elunxwemeni, ukusuka kwisikhephe, ematyeni, kwijetty, njl. Kuxhomekeka kuhlobo lokuloba oza kulwenza rhoqo, uya kuba nakho ukulifumana ngokuchanekileyo.
Eyokugqibela kodwa engancinananga, luhlahlo-lwabiwo mali. Zonke ezinye iingcebiso ziphulukana nokubaluleka ukuba uhlahlo-lwabiwo mali alunakulunga. Ukuloba ngumdlalo kunye nokuzonwabisa. Asinakulindela ukuba sikwazi ukuchitha uninzi lweemali esizigcinileyo kulo msebenzi wokuzonwabisa. Ke ngoko, kufuneka silungelelanise ezi ngcebiso zingasentla kuhlahlo-lwabiwo mali esikhethe ukulusebenzisa kwinduku.
Iintonga zokuloba ezilungileyo kunye namaxabiso abo
Ngoku siza kukhetha ukuba zeziphi ezona ntonga zibalaseleyo zokuloba ngokuxhomekeke kwizinto ezichazwe kwinqaku kwaye sibonise amaxabiso kunye neengcebiso.
Intonga yokuloba elwandle
Olu luhlu siqala ngokuloba elwandle. Ezi ntlobo zeentonga zihlala zinokuchasana namandla amakhulu. Kungenxa yokuba kufuneka bamelane nemisinga yolwandle kwaye kufuneka babambe iisampulu ezinkulu. Ezi ntonga ziyafumaneka kwiimodeli ezininzi. Sifumana ubude obahlukeneyo kwaye ezinye zinokufakwa.
Ezi ngcongolo zahlukile kwamanye amanzi acocekileyo ikakhulu kwimango, Equlathe umbandela ukuze ityiwa yetyuwa ingayichaphazeli, amakhonkco kunye nesikhombisi zenziwe ngezinto ezingenasici kwaye ububanzi beentonga bukhulu.
Apha ungathenga le ntonga ngexabiso elihle. Ukuba ucofa aphaUngathenga imodeli enganyangekiyo kumaza aqinileyo.
Iindonga zokuloba imilambo
Ezi ntlobo zezokuloba amanzi emilanjeni. Ezi ziintonga ezahlukileyo kakhulu kunangaphambili. Izinto ezisetyenziselwa olu hlobo lweengcongolo zibuthathaka. Izibambo zihlala zenziwe nge-cork ye-anatomical njengoko kunganyanzelekanga ukuba ixhathise isenzo se-saltpeter. Iirandi zimfutshane kwaye zibhetyebhetye ekuphatheni okukhulu. Iintonga zeCarbon fiber zezona zicetyiswayo kolu hlobo lokuloba.
Apha ungafumana enye yabaqalayo ngexabiso elihle kwaye, koku unxibelelwano, ungathenga enye ngomgangatho ophezulu kwaye ikhava ifakiwe.
Ezi ntonga zezokuloba amanzi emilanjeni kodwa zahlukile kwezoqhelekileyo. Phakathi kwezinto eziluncedo kwezi ntonga kukuba xa zisongiwe zithatha indawo encinci. Ukuba uyifaka ngokupheleleyo iyakufikelela kwiimitha ezili-9 ubude. Zisetyenziswa ngokubanzi ukuloba ihhuku. Inkqubo yayo yenza ukuba ingabinzima kwaphela. Eyona nto icetyiswayo yicarbon fiber. Kwiimeko ezininzi, ezi ntonga zenziwe ukuze kungabikho mfuneko yokusebenzisa amakhonkco okanye iireels. Olunye uncedo kukuba zinokusetyenziselwa ulwandle kunye nomlambo. Inezinto ezithile kuphela ezahlukileyo ukuba uya kuloba kwilizwekazi okanye emanzini olwandle.
Apha unokufumana intonga yeteleskopu kwintengiso.
Ndiyathemba ukuba ngezi ngcebiso ungathenga ezona ntonga zilungileyo zokuloba ezikufanelayo kunye nezinto ozithandayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Ezona ntonga zilungileyo zokuloba